I-china izinga eliphakeme nelinembile lokushisa kwedijithali i-WT-1 Ukukhiqiza nefektri | Sanhe
Isitayela sepeni, 125MM amathiphu wokuzwa insimbi engagqwali, ukulinganisa okuqondile, okuphathekayo, ububanzi bokulinganisa obubanzi;
Ifanele ifriji, ukufudumeza nokucutshungulwa kokudla njll.
Ububanzi besilinganiso sethempelesha: -50 ℃ ∽ + 300 ℃ (-58 ℉ ∽ + 572 ℉)
Ukunemba (-20 ℃ ~ 80 ℃) ± 1 ℃
Umsebenzi wokukhumbula izinga lokushisa
Isilinganiso sethempelesha nomsebenzi wokubonisa wevolthi ephansi
Umsebenzi wokonga amandla: Uma kungekho ukusebenza kungakapheli imizuzu engu-15, izocima ngokuzenzakalela
Isibonisi sokuhluleka kwenzwa
Ukuguqulwa komsebenzi we-Fahrenheit ne-Celsius
[ON / 0FF]: Cindezela lo khiye ukuvula noma ukuvala. Izobonisa izinga lokushisa elilinganisiwe amasekhondi angu-1.5 ngemuva kokuvula umshini, bese ufaka imodi yokukala. Uma kungekho ukusebenza, kuzozivala ngokuzenzekelayo ngemuva kwemizuzu engu-15.
[℃ / ℉]: Cindezela le nkinobho kumodi yokukala izinga lokushisa ukuze ubone ukuguqulwa phakathi kwe-Fahrenheit ne-Celsius.
Isilinganiso sethempelesha nombukiso wamandla aphansi: Uma i-voltage ingaphansi kuka-1.3V, i-LCD izobonisa - "i-voltage ephansi".
Lapho inzwa ivulekile noma ingaphansi kwebanga lokulinganisa, izobonisa i-E00, lapho inzwa ifinyezwa okwesikhashana noma izinga lokushisa langempela liphakeme futhi isilinganiso se-E11 sizokhonjiswa uma sikububanzi.
Langaphambilini Izimboni ze-thermometer ze-elekthronikhi ze-elekthronikhiTPM-900
Olandelayo: I-thermometer yokudla kagesi i-WT-2 yekhishi
izinga lokushisa kwenyama yedijithali
funda ithemomitha yenyama ngokushesha
I-thermometer ye-elektroniki yokukala i-temperatur ...
i-aquarium thermometer yedijithali, isilawuli sokushisa se-incubator, isilawuli se-digital thermostat, isilawuli sokushisa se-thermostat, i-thermometer yedijithali, ukulawulwa kokushisa okuzenzakalelayo,